Ibex 35 pakati pematanho e9.200 uye 9.600 poindi | Ehupfumi Zvemari
Ibex 35 pakati pematanho e9.200 uye 9.600 mapoinzi
Kwenguva yakareba, indekisi inosarudza yeSpanish equities, iyo Ibex 35, haina kufamba kudaro gare gare. Mune tambo inofamba pakati pezviuru mazana mapfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemazana matanhatu emakiromita ayo ndiwo anoratidza mafambiro muneimwe nzira kana imwe. Kusvika padanho rekuti vashoma vadiki nepakati varimi vakamirira iyo kutyora kweimwe yeiyi inotsigira. Kuchengetedza kushomeka muaccount yako account kuti utore mukana webhizinesi mikana mumisika yekutengesa.
Kubva pane akajairika mamiriro, hapana sarudzo asi mira, mirira uye mirira zvakare. Kune misika yequity kuti vazvitsanangure ivo kamwechete sezvo kuneta kuri kutora zviito zvevashambadzi. Hazvishamise kuti, parizvino pane mashoma misiyano pakati pemitengo yavo yepamusoro uye yepasi, nemisiyano mune akanakisa ematare akatenderedza 2%. Uine mashoma sarudzo dzekutengesa mashandiro kuti mari yako ichengetwe munguva pfupi, nezvose izvi zvinoreva mumafambiro akatorwa.
Kune rimwe divi, zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti kana izvi zvitsigiso zvikavhuniwa, mafambiro achave e kusimba kukuru, imwe nzira kana imwe. Uye isu tinofanirwa kuve takagadzirira kuvandudza zano rekudyara kuti riite mari yakaiswa mumisika yemari inobatsira. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu uye pamwe kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha. Zvekuti nenzira iyi mafambiro ari muhomwe anogona kukwidziridzwa.
1 Ibex 35: kugadzikana kwakadzika
2 Matambiro avanogona kuwana
3 Kuchengetedzwa kwakanyanya
4 Chivimbo chekutenda: inoti chii?
5 Ndedzipi nzira dzinogona kushandiswa?
Ibex 35: kugadzikana kwakadzika
Chero zvazvingaitika, chimwe chinhu chinotsanangudza yakasarudzika indekisi yemari yenyika ndiko kugadzikana kwayo kukuru mumwedzi ichangopfuura. Iyo haina kuwana yakawanda, asi haina kuona kuderera kweayo akakosha zvakanyanya kukosha kana. Nemisiyano mumakotesheni avo idiki kwazvo pamusoro pemwedzi mishoma yapfuura uye izvo zvinogona kushamisa chikamu chakanaka chevamiriri vemari. Kunyangwe vamwe vacho vachifungidzira kuti indekisi inosarudzika yemari yenyika inogona revalue kusvika 10% mukati megore rino remari.
Nepo kune rimwe divi, zvese zviratidzo zvinonongedzera kwazviri kuri pamutengo wemisika yepasi rose yemari. Pakupera kwezuva ivo ndivo vanove vanoona maitiro ayo iyo Ibex 35 inofanira kutora mumwedzi iri kuuya kuti vasiye maitiro asina kwayakarerekera iyo yakanyudzwa panguva ino chaiyo. Pasina iyo kondirakiti vhoriyamu kuve kunoshamisa kwazvo, kwete mune imwe pfungwa kana mune imwe uye iyo paramende inogona kupa kumwe kuratidza kwekuti kuita kwako kunenge kuri chii kubva zvino zvichienda mberi. Chinhu icho vashoma uye vepakati varimari vakamirira nekumwe kunetseka.
Matambiro avanogona kuwana
Chero zvazvingaitika, zvichave zvakafanira kunyatsoteerera kumasaini ayo anogadzirwa mumisika yemari kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti ndidzo dzinozoona kupinda kwedu munzvimbo dzezvidziviriro zvakanyorwa pamisika yemari. Tiri kune rimwe divi, isu hatigone kukanganwa chero nguva iyo misika yezvemari vane hanya zvakanyanya nemhedzisiro yebhizinesi uye neiyi pfungwa vanogona kuita shanduko mukuchinja, mune imwe pfungwa kana imwe.
Nepo kune rimwe divi, zvinoita sekunge rese data rinoratidza kuti purofiti yemakambani ichave yakadzikira pane dzimba dzakapfuura. Kunyangwe isiri yakaderera margins akakosha kwazvo uye kuzvitora mukurangarira kana uchitora chinzvimbo mumisika yemari, zvese mumisika yenyika uye kunze kwemiganhu yedu. Asi icho chichava chimwe chemanyuko eruzivo atinogona kuva nawo ekuvandudza chero mhando yemari yekudyara. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha zvehunhu hwemusika wemasheya.
Chimwe chinhu chinogadza iyo IPO mumwedzi iri kuuya hapana mubvunzo mamiriro ekutenga emasheya. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kurangarirwa kuti munguva dzino chaidzo mamiriro ezvinhu apo kumanikidzwa kwekutenga kuri pamusoro peanotengesa uye chero nguva mutemo wekupa uye kudiwa uchafanirwa kuchinjiswa kuchazvino chiripo chinoratidzwa nemisika. Mari inoshanduka. Iko kune mamwe masheya kukosha aripo panguva ino pamusoro pekukosha chaiko. Semuenzaniso, mune chaiyo kesi yemagetsi makambani, ayo akagadzira yakanyanya kutaurwa yekusimudzira rally mumwedzi yekutanga yegore rino.
Kune rimwe divi, kune zvimwe zvirevo pane kuchinjana izvo zvakagadzira kushanya kwakasimba kwazvo uye ivo vapfuura zvakanyanya mitengo yavo. Uye panguva ipi neipi ivo vanofanirwa kubvisa aya emakwenzi kuti vadzokere kune yavo chaiyo mamiriro uye kuti zvakajairika vanomiririra akanyanya kufungidzira akachengetedzwa mune akasiyana masheya emasheya emunyika uye epasi rese stock stock. Parizvino, ivo havazofanirwe kubatwa sezvo vachigadzira njodzi dzinofanirwa kutariswa senge dzakanyanya uye dzinogona kukutungamira kune dzimwe nguva kushamisika kwakashata kubva panguva dzino chaidzo. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha.
Chivimbo chekutenda: inoti chii?
Zviratidzo zvinotungamira uye zvekutendeseka zvakadzikama, kunyangwe pamwe neapo neapo rebound, asi zviri kutanga kutarisira shanduko muitiro. Mupfungwa iyi, kupora kuri pachena kwave kuri mu Zvinotarisirwa Chikamu cheConfidence Indicator ChiGerman ZEW, yatove kuratidza mishanu yakateedzana mwedzi yekuvandudza kubva munaGumiguru ezasi el IFO yakakwira zvakare munaKurume mushure memwedzi mitanhatu yakateedzana.
Zvisinei, iyo Kugadzira PMI vachiri kuratidza hapana zviratidzo zvekudzoka. MunaFebruary yakapinda munharaunda yechibvumirano (pazasi makumi mashanu), uye munaKurume yakaramba ichiderera, ichibata danho re50 (neyakare yapfuura 47,6), chikamu chepasi chakanyoreswa kubva munaKubvumbi wa49,6 Chero zvazvingaitika, izvi zvinyorwa zvePMI hazvibvumidze. isu kuti tifanoona kuvandudzwa kwehuwandu hwekukura, zvirinani panguva yekutanga yegore. Chimwe chinhu chakasiyana kwazvo chii chinogona kuitika muhafu yepiri yegore uye panogona kuchinja zvishoma.
Ndedzipi nzira dzinogona kushandiswa?
Kutora zano rezvekudyara panguva ino hapana chakapotsa kusakwanisika nekuda kwekushomeka kwekuchinja uko makambani akanyorwa mumisika yemari. Iko kungadaro kunyange mashandiro ekutengesa inounza dambudziko rakakomba kumaturu ekudyara nevatengesi vadiki nepakati Beyond the trends dzinogona kugadzirwa mune isiri kure kure ramangwana uye netarisiro shoma yekuita kuchengetedza kunobatsira kubva munzira idzi.
Chero zvazvingaitika, unogona kuita zvimwe zvezviito zvatiri kuzokuratidza kubva zvino zvichienda mberi.
Mirira iyo panorama kuti ive yakajeka uye ive mukati kukwana kwakazara kune zvinogona kuitika mumwedzi inotevera. Kutsigira mafambiro mumusika wemasheya nekuchengetedzeka kukuru mumirairo yaunenge uchizadzisa mumisika yemari.
Iwe unogona kutora zvinzvimbo mumitengo ye yakanyanya kuchengetedza kana kudzivirirwa chimiro izvo zvinogona kukupa iwe yakanyanya kuita purofiti mune yepakati nepakati yakareba. Nemipendero yekupindirana inodarika nhanho dze5% uye iyo inogona kubatsira kugadzira yakasimba uye pamusoro pebhegi rese rekuchengetedza.
Imwe nzira yekudyara inoenderana nekutora zvinzvimbo mu mamwe misika yemari uko kukura kukuru kunogona kupihwa mukuchinja kwemitengo. Semuenzaniso, mune izvo zvezvinhu zvakagadzirwa kana simbi dzakakosha, pakati pezvimwe zvakakosha izvo zviripo panguva ino.
Gadzira a yakatarwa-temu bhangi mutero kusvikira zvinoitika mumisika yemakero zvachinja. Kuti uwane kudzoka kusevha, kunyangwe iri shoma, asi mune zvese zviitiko inovimbiswa. Iine huwandu hwezvibereko huri pakati pe0,20% ne0,75%, asi isingabhadharwe kubva kune chero mhando yemakomisheni uye imwe mari mukutungamira kwayo kana kugadzirisa.
Kushanda sekukweretesa mari kusvika yave iyo chaiyo nguva yekutora zvinzvimbo mumisika yemasheya. Pasina kuisa pangozi mari yako inowanikwa yekudyara chero nguva uye uve yako huru kukurudzira kuita chibvumirano chebhangi ichi.
Pasina kukanganwa kuti chero sarudzo zvisati zvaitika inogona kuve nemhedzisiro yakaipa pachirevo chemari mukupera kwegore. Sezvo ichigona kukuita iwe kunonoka iyo yenguva yekusingaperi iyo iwe yauri kuenda kunangisa yako upfumi. Kusvika pakuti iwe uchafanirwa kumirira kwenguva yakareba kusvikira iwe uchifanira kumisikidza zvinzvimbo zvako mumisika yequity, inova mushure mezvose zvazviri. Mugore iro riri kuve rakaomarara pamusika wekutengesa. Chivimbo Chinoratidza
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Ibex 35 pakati pematanho e9.200 uye 9.600 mapoinzi
Makambani mana ane chikamu chakanakisa pane Ibex 35